အက်ရှလေဂျုံးစ်: များ၏ကြယ်ပွင့် - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် "အက်ရှလေဂျုံးစ်: များ၏ကြယ်ပွင့်
အက်ရှလေဂျုံးစ်ခေတ်သုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုက်၌ထင်ရှားအဖြစ် လူပုဂၢဳိလ္မ်ားစီးရီးအတွက်ကစားလူသိများမင်းသမီး 43 နှစ်, အဆိုပါလူငယ်နှင့်အညစ် ထို့နောက်အတွက်အစောပိုင်း 2000 နှစ်, အဆိုပါ Bold နှင့်တင့်တယ် 2004 နှင့် 2016 အကြား, ကွာရှင်း အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုသည်။ သူမသည် 2015 များအတွက်လက်ထပ်ခဲ့သည် အချို့ယောလ Henricks ။ အချို့သောရက်ပေါင်းရှိပါတယ်, အက်ရှလေဂျုံးစ်သူမ၏ခင်ပွန်းကန့်သတ်, တရားရုံးတစ်ဦးပထမဦးဆုံးအနိုင်ရရှိရရှိခဲ့ တစ်ဦးဖယ်ရှားရေးမှ.
စာရွက်စာတမ်းများအတွက် လူပုဂၢဳိလ္မ်ား ပြီးခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်တရားရုံးမှတင်သွင်း, ရယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်, အက်ရှလေဂျုံးစ်ရှိသည်ဖို့မလုပ်ပဲ သြဂုတ်လ 17 အပေါ်အိမ်မှာကျန်ရစ်ကုမ္ပဏီအတွက် သူ့သား Hayden။ အဆုံးစွန်သောမေလက၎င်း၏တတိယနှစ်ပတ်လည်နေ့ကျင်းပ။ မိမိအထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ, မင်းသမီးအိမ်မှာကျန်ရစ်ကြစိတ်ချပါ "ဟုသူမကသူမ၏အသက်အဘို့ကိုကွောကျရှံ့သောကြောင့်နှင့်သားတော်၏"။ ယင်းတားမြစ်မိန့်သူ၏ဇနီးထက်နည်းတရာမီတာအတွက်ပေမယ့်, ယောလ Henricks ဆက်လက် "နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်နောက်တော်သို့လိုက်" အက်ရှလေဂျုံးစ်ပြန်အဖြစ်။
အခုဆိုရင်အက်ရှလေဂျုံးစ်အကောင့် တစ်ဦးတည်းသောထိန်းသိမ်းခံဟုဆိုကာ သူတို့ရဲ့နည်းနည်း Hayden ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့သူမ၏ခင်ပွန်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားသူတို့၏လေးနှစ်အတွင်းမှာသူ့ကိုသည်းခံရ၏ရာ၌ခန့်ထားပြီမယ်လို့တရားမျှတမှုကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု၏အသေးစိတျအပျနှံ: "သူကပြည်တန်ဆာမသည်ငါ့ကိုခေါ်သော ကျွန်မမှန်မှန်ဖောက်ပြန်သည်ဟုစွပ်စွဲခံရထိုအခါငါသို့ရာတွင်အဘယ်သူမျှမအဆက်အသွယ်ရှိတော်မူသောနဲ့ငါ့ဟောင်းတဦးရညျး, "၏မယုံနိုင်လောက်အောင်စိတ်အားကြီး Bridget အတွက်စကားပြန်ညွှန်ပြထားပြီး အဆိုပါ Bold နှင့်တင့်တယ်။ သူမသည်သူမ၏ခင်ပွန်းပြီးသားအရက်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာကသူ့လက်ကောက်ဝတ်လိမ်ခဲ့လည်းမြေပေါ်မှာ Taskbar မှာအရင်ကမရှိသေးတဲ့မယ်လို့ရှင်းပြတယ်။ ဒါဟာအစဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်ဟု ကျိုးလက်အက်ရှလေဂျုံးစ်ဘယ်အရေးတကြီးလုပ်ခံရဖို့ကဦးဆောင်ခဲ့သည်။
© Backgrid အမေရိကန်နိုင်ငံ / Bestimage
အက်ရှလေဂျုံးစ် - နာမည်ကြီးတွေနိုဝင်ဘာလ22017 အပေါ် Beverly Hills မှာအတွင်းပါတီမှာ "PartyPopPost" ရောက်ရှိမည်
ပြည်သူ့: " ပို. ပို. လှပသော!" Laurence Boccolini သည်သူ၏ပြပွဲ၏ရိုက်ကူးရေးကာလအတွင်းကသူ၏အသစ်အကြည့်နဲ့သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေအံ့သြစေတယ်
ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်မှ၎င်း၏စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးကျွမ်းကျင်မှုပြနေစဉ်မင်းသားဟယ်ရီ $ 1 ဘီလီယံရောင်းချမှုပိတ်
ကြော်: ကြက်သွန်ဖြူ, သံပုရာနှင့်ပုဇွန်နှင့်အတူအီတလီခေါက်ဆွဲဥရောပနိုင်ငံ, သင်ကောင်းသင့်ရဲ့လက်ချောင်းကိုလျက် - နောက်ထပ်ကျန်းမာရေး MAG